SAMBAVA : Tovolahy roa voatondro no namono nahafaty vehivavy iray matin’ny fitsaram-bahoaka
Tovolahy roa no hita faty nitsirara teo amin’ny biraon’ny Kaominina “Tanambao-Daoud “ Sambava , omaly talata 18 jona. Voalaza fa mpivahiny any an-toerana ireto lehilahy roa hita faty ireto. 19 juin 2019
Raha ny loharanom-baovao voaray dia nisy vehivavy iray tsy hita popoka tao amin’ny fokontany Andramanolotra, tamin’ny herinandro lasa teo iny. Ny nahagaga sady nampalahelo anefa dia efa ny fatin’ ilay vehivavy sisa no hitan’ olona. Raha ny fahitan’ireo nanatri-maso ny vatana mangatsiakan’ ity vehivavy ity dia tamin’ny fomba feno habibiana tanteraka no nanamperana ny ainy araka ny loaharanom-baovao hatrany.
Nandritra ny fanadihadiana nataon’ny mpitandro filaminana dia voalaza fa ireo tovolahy hita faty ireo no voatondro ho tompon’ antoka tamin’ny famonoana tamin’ny fomba feno habibiana ilay vehivavy very avy eo dia hita faty.
Araka ny fanampim-panazavana hatrany dia ny alatsinainy 17 jona no voasambotra ireo tovolahy ireo ary notanana vonjimaika tao amin’ny “Violon” Kaominina Tanambao-Daoud. Noho ny hatezeran’ny fianakavian’ilay vehivavy anefa, hoy ireo nahita maso dia tonga nangataka ny hanolorana ireto tovolahy roa voampanga ho namono ny havany ireto ny fianakaviany. Tsy nety nanaiky ny hanolotra ireo voampanga ireo izany hatramin’ny farany ny Ben’ny tanàna Totofeno Modeste Philbert fa nandrara azy ireo mafy. Ireto farany izay efa vonona hanatanteraka ny fitsaram-bahoaka. Rehefa tsy nety nanaiky moa ny Ben’ny tanàna dia niditra an-keriny ihany izy ireo. Ary voalaza fa naka sy namono nahafaty azy roalahy voarohirohy ireto io, omaly talata io. Noentin’izy ireo tany amin’ny toerana tsy fantatra izy roa lahy ary dia izao hita faty izao taorian’izay.
Misokatra ny fanadihadiana momba ny raharaha fahafatesana olona ireto amin’izao fotoana izao, izay sahanin’ny zandarimaria ao an-toerana ihany.
Iaraha-mahalala anefa fa efa nanentanan’ny fitondrana sy ny mpitandro filaminanana ny Malagasy rehetra ny tsy tokony hanaovana fitsarambahoaka izany intsony fa tokony hanolorana izay olona nahavita heloka ny manampahefana.
Arahina akaiky ny fivoaran’ny toe-draharaha.
Maty tsy tra-drano ilay tovolahy nitondra “moto” LOZAM-PIFAMOIVOIZANA (160) 14 janvier 2020 Lehilahy milaza mahatafiditra mpiasa ao amin’ny « Finance » nosamborina FISOLOKIANA AVO LENTA (155) 14 janvier 2020 Vehivavy novonoim-badiny dia naleviny tao an-tanin-davanila SOANIERANA-IVONGO (106) 13 janvier 2020 Maty momoka ary tsy nisy vokany ny fitakian’ny Tim FAMBOLENA KORONTANA (99) 15 janvier 2020 Trano sy tanànan’olona ahiana harodan’ny lavaka nangadiana fasika LOZA MITATAO (86) 14 janvier 2020 Nitsidika ny Minisiteran’ny Serasera sy kolontsaina ROVA MANJAKAMIADANA (74) 13 janvier 2020